Home Wararka Ra’iisul Wasaare Rooble oo isbitaalka ku booqday afhayeenka oo qarax ku dhaawacmay.
Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa caawa Isbitaalka Digfeer ku booqday Afhayeenka Xukuumadda Maxamed Ibraahim Macalimuu oo loogaga daweynayo dhaawac ka soo gaaray qof naftii halige ah oo maanta qarax la beegsaday gaari uu la socday.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa la sheekeystay Macalimuu oo xaaladdiisu soo hagaageyso, waxaana uu Alle uga baryay inuu caafimaad deg deg ah siiyo, kana soo kabsado dhibka gaaray.
Sidoo kale Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa ka dhagaystay warbixinta xaalada caafimaad ee Afhayeenka Maamulka iyo dhakhaatiirta ku howlan wax u qabashada Maxamed Ibraahim Nuur.
Previous articleAnshax xumida Farmaajo & Fahad oo la shaaciyay
Next articleAl Shabaab oo sheegtay inay weerar ka geysteen gudaha dalka Kenya
Ciidanka Xooga Dalka Soomaaliyeed oo iska fogeeyay eeda xasuuqii ka dhacay...